Ahoana no Niarovana An’i Jesosy?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwanyama Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Myama Norvezianina Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tongan Tseky Tsonga Turkmène Tuvalu Tzotzil Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa
INDRAINDRAY i Jehovah dia manao zavatra mahagaga mba hiarovana an’ireo mbola kely ka tsy afaka miaro tena. Mety hahita fomba iray anaovan’i Jehovah izany ianao, raha mitsangantsangana any ambanivohitra. Mety ho tsy tena azonao anefa izay mitranga, amin’ny voalohany.
Mahita vorona midina mankeo akaikinao ianao. Toa maratra ilay izy. Mitaritarika ny elany iray izy, ary mandositra rehefa mitady hanatona ianao. Arahinao izy nefa tsy mety azonao. Tampoka eo anefa, dia lasa nanidina ilay vorona. Hay tsy naratra akory ny elany! Inona no nataon’ilay vorona, raha fantatrao?...
Hay nafeniny tao anaty bozaka, teo akaikin’ilay toerana nidinany teo ny zanany kely. Natahotra io renivorona io sao ho hitanao ireo zanany ka hampijalinao. Mody naratra àry izy mba hisarihana anao hiala teo. Iza, raha fantatrao, no afaka miaro anao tahaka ny renivorona miaro ny zanany?... Lazain’ny Baiboly fa toy ny voromahery manampy ny zanany kely i Jehovah.—Deoteronomia 32:11, 12.
Ahoana no iarovan’io renivorona io ny zanany?
I Jesosy, Zanany malala, no sarobidy indrindra aminy. Fanahy mahery tahaka ny Rainy i Jesosy, tamin’izy tany an-danitra, ka afaka nikarakara tena. Nila fiarovana kosa izy, rehefa nateraka ho zazakely tetỳ an-tany.
Tsy maintsy nihalehibe ary tonga lehilahy lavorary i Jesosy, mba hanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra momba azy. Nandraman’i Satana novonoina anefa izy mba tsy hahatanteraka izany. Hafa kely ny tantaran’io fanandramana namono an’i Jesosy tamin’izy mbola kely io, sy ny fomba niarovan’i Jehovah azy. Tianao ve ny handre ilay izy?...
Nataon’i Satana nisy kintana iray namirapiratra teny amin’ny lanitra, tany Atsinanana, rehefa teraka i Jesosy. Nisy mpanandro nandeha lavitra be, mba hanaraka an’io kintana io hatrany Jerosalema. Nanontanian’izy ireo izay toerana hahaterahan’ilay ho mpanjakan’ny Jiosy, rehefa tonga tany izy. “Ao Betlehema”, hoy ireo lehilahy nahafantatra ny voalazan’ny Baiboly momba izany.—Matio 2:1-6.
Inona no nolazain’Andriamanitra tamin’ireo mpanandro avy nitsidika an’i Jesosy, ka nahatonga an’i Jesosy tsy ho faty?
Ren’i Heroda, ilay mpanjaka ratsy fanahy tany Jerosalema, ny momba io mpanjaka vaovao teraka tany Betlehema io. Hoy àry izy tamin’ireo mpanandro: ‘Tadiavo ilay zaza, dia miverena milaza vaovao atỳ amiko.’ Nahoana no tian’i Heroda ho fantatra izay nisy an’i Jesosy?... Satria nialona izy ka te hamono azy!
Ahoana no niarovan’Andriamanitra ny Zanany?... Nanao fanomezana ho an’i Jesosy ireo mpanandro, rehefa nahita azy. Nampitandrina azy ireo tao amin’ny nofy Andriamanitra, tatỳ aoriana, mba tsy hiverina tany amin’i Heroda. Lalan-kafa àry no narahin’izy ireo, rehefa hody izy, fa tsy nandalo tany Jerosalema. Tezitra be i Heroda, rehefa hitany fa lasa ireo mpanandro. Nitady hamono an’i Jesosy izy, ka nasainy novonoina daholo ny zazalahy latsaka ny roa taona tany Jerosalema! Efa lasa anefa i Jesosy tamin’izay.
Ahoana no nandosiran’i Jesosy raha fantatrao?... Nasain’i Jehovah nandositra tany Ejipta niaraka tamin’ny fianakaviany i Josefa, vadin’i Maria, rehefa lasa nody ireo mpanandro. Tsy natahorana hovonoin’i Heroda ratsy fanahy i Jesosy tany. Nisy zavatra hafa indray nasain’Andriamanitra nataon’i Josefa, rehefa tafaverina avy tany Ejipta niaraka tamin’i Jesosy izy sy Maria, taona maromaro tatỳ aoriana. Nolazainy tamin’i Josefa tao amin’ny nofy fa tokony hifindra tany Nazareta izy ireo. Tsy hisy loza hanjo an’i Jesosy tany.—Matio 2:7-23.
Ahoana no namonjena indray an’i Jesosy tamin’izy zaza?
Hitanao ve ny fomba niarovan’i Jehovah ny Zanany?... Iza, hoy ianao, no tahaka ireo voronkely nafenin-dreniny tao anaty bozaka, na tahaka an’i Jesosy tamin’izy mbola kely? Tsy tahaka azy ireo ve ianao?... Misy te hanimba anao koa. Iza izany raha fantatrao?...
Lazain’ny Baiboly fa tahaka ny liona mierona te hihinana antsika i Satana. Ny biby madinika matetika no tian’ny liona hasiana. Mitovy amin’izany koa i Satana sy ny demoniany, satria ny ankizy matetika no tian’izy ireo hasiana. (1 Petera 5:8) Matanjaka noho i Satana anefa i Jehovah. Afaka miaro ny zanany i Jehovah, ary afaka mandrava ny teti-dratsy ataon’i Satana hamelezana azy ireny.
Misy zavatra ampirisihan’ny Devoly sy ny demoniany mba hataontsika, araka ny Toko 10. Inona izany raha tadidinao?... Ie, ampirisihiny isika hanao ilay karazana firaisana lazain’Andriamanitra hoe ratsy. Iza ihany anefa no tokony hanao firaisana?... Ie, olon-dehibe roa, lahy sy vavy, misora-panambadiana.
Mampalahelo anefa fa misy olon-dehibe tia manao firaisana amin’ny ankizy. Mampiana-dratsy ankizilahy sy ankizivavy izy ireny, rehefa manao izany. Manomboka mampiasa amin’ny fomba ratsy ny filahiany sy ny fivaviany koa àry ireo ankizy ireo. Izany no nitranga taloha, tany an-tanànan’i Sodoma. Lazain’ny Baiboly fa nitady hanao firaisana tamin’ireo lehilahy tonga hitsidika an’i Lota, ny olona tao amin’izany tanàna izany, ‘hatramin’ny ankizy ka hatramin’ny antitra.’—Genesisy 19:4, 5.
Nila fiarovana i Jesosy. Mila arovana amin’ny olon-dehibe sy ankizy koa ianao, raha mitady hanao firaisana aminao izy ireny. Mody miseho ho namanao ireny olona ireny matetika. Mety hilaza izy fa homeny zavatra ianao raha tsy mitantara amin’ny olona hoe te hanao firaisana aminao izy. Tia tena anefa io olona io, tahaka an’i Satana sy ny demoniany, ka te hahazo fahafinaretana fotsiny. Manao firaisana amin’ny ankizy izy, mba hahazoany izany fahafinaretana izany. Tena ratsy be izany!
Fantatrao ve hoe inona no mety hataony amin’izany?... Mety hitady hikitikitika ny fivavianao na ny filahianao izy, na akasokasony amin’ny anao mihitsy aza ny filahiany na ny fivaviany. Tsy tokony hisy havelanao hilalao ny filahianao, na fivavianao anefa, na ny zandrinao, na ny zokinao, na i Dada sy Neny aza. Tsy azon’olon-kafa kitikitihina ny filahiana na fivaviana.
Inona no tokony holazainao sy hataonao raha misy olona ratsy loha mitady hikasikasika anao?
Ahoana no hiarovanao ny vatanao amin’ny olona manao zava-dratsy toy izany?... Voalohany, dia aza avela hisy hilalao ny filahianao na ny fivavianao. Raha misy mitady hanao an’izany dia teneno mafy izy hoe: “Mipetraha tsara! Halazako ianao!” Ary raha milaza ilay olona fa ianao no ho bedy, dia aza mino izany, satria tsy marina izany. Tonga dia alazao ilay olona, na iza izy na iza. Tantarao izay nataony na dia milaza aza izy fa tsy hisy hahafantatra ilay zavatra afa-tsy ianao sy izy. Mandehana mandositra, ary tantarao izay nataony, na mampanantena hanome zavatra tsara izy, na mampitahotra anao.
Aza matahotra fa mitandrema tsara fotsiny. Henoy ny ray aman-dreninao, rehefa mampitandrina ny amin’ireo olona na toerana mety hahitanao loza izy. Azo inoana kokoa tsy ho tratran’ny olon-dratsy mety hanimba anao ianao raha mitandrina.
Hahita fomba hiarovan-tena amin’ny firaisana maloto ianao, raha mamaky ny Genesisy 39:7-12; Ohabolana 4:14-16; 14:15, 16; 1 Korintianina 6:18; 2 Petera 2:14.
Hizara Hizara Ahoana no Niarovana An’i Jesosy?